Vita ny famindram-pahefana: niverina any amin’ny filoha Rajoelina ny fitantanana firenena | NewsMada
Vita ny famindram-pahefana: niverina any amin’ny filoha Rajoelina ny fitantanana firenena
Niverina amin’ny tompony ny “lakile”, araka ny fomba fiteny. Tontosa omaly ny famindram-pahefana teo amin’ny filoham-pirenena teo aloha, Rajaonarimampianina sy ny filoham-pirenena vaovao, Rajoelina, teo anatrehan’ny filoham-panjakana Rakotovao Rivo.
Nialohavan’ny fikatonan-trano, nanomboka tamin’ny 11ora sy 7mn ka hatramin’ny 11ora 47mn izany. Nivoaka ny efitrano ny filoham-panjakana Rakotovao Rivo, tokony ho tamin’ny 11ora sy 30mn. Mbola nihidy tao kosa ny filoha teo aloha sy ny vaovao. Nivoha ny varavarana tamin’ny 11ora 47mn. Niditra ireo mpiara-miasa amin’ny filoha Rajoelina avy eo, nahitana an’Andriambalo Lila, Rakotondrazafy Lalatiana, Randriamandranto Richard, Rakotomanga Rinah… Samy velon-tsiky ny filoha roa tonta rehefa niditra ny mpanao gazety ary efa vonona teo anoloan’izy ireo, ambony latabatra ireo boky mirakitra ny famindram-pahefana… Nirosoana ny sonia teo amin’ireo boky ireo, avy eo. Niarahaba azy ireo ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotovao Rivo, avy eo, ary nivoaka voalohany, nandao ny lapam-panjakana Iavoloha, rehefa nitantana ny firenena nandritra ny efa-bolana sy herinandro.
Tsy misy resaka fanalahidy…
Taorian’izany, nidina ny tohatra ny filoha teo aloha, Rajaonarimampianina ny filoha vaovao, Rajoelina, avy eo ary nandeha tao amin’ny efitrano ahitana ilay fanalihidy lehibe, mariky ny varavaran’ny lapa sy i Madagasikara. “Tsy misy resaka fanalihidy amin’ny famindram-pahefana”, hoy ny HCC, herinandro vitsy lasa izay. Natao mari-pamantarana fotsiny izany tamin’ity indray mandeha ity ka tsy nisy ny fanolorana izany fanalahidy izany. Nanao veloma ny lapa tanteraka izany ny mpanorina ny HVM. Nisafo ny andian-tafika farany ny tenany avy eo ary niresaka fohy amin’ireo kabinetrany sy nitafa tamin’ny mpanao gazety. “Vita ny andraikitra nosahaniko ary miarahaba ny filoha hahaleo hahalasana amin’ny fitondrana ny firenena”, hoy ny teny fohy nataony. Namily ny fiara nentiny ny tenany, avy eo, ny filoha teo aloha, Rajaonarimampianina. Nanamarika izao lanonam-panjakana izao ny tsy fisian’ny lahateny, na koa ny vahiny nasaina…
Tsiahivina fa ny 24 janoary 2014 ny nanomezan’ny filoha Rajoelina ny fahefana ny filoha Rajaonarimampianina raha nandray ny fitantanana ny firenena ny tenany.